प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा व्यवस्था गर्नेछु : वडा अध्यक्ष श्रेष्ठ - Janawajnews.com | Online News Portal Nepal
८ असार २०७९, बुधबार १४:४०
कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष कोमल कुमार श्रेष्ठले खानेपानीको समस्या समाधान गर्नु र कमला नदीले कटान गर्ने खेतियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्नु नै आफ्नो मुख्य योजना रहेको बताउनुभयो । रेडियो सिन्धुली आवाजसंगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
यस्तै, उहाँले समृद्ध वडा, सुखी वडाबासी भन्ने नारा लिएर आएको बताउदै आफुले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने बिश्वास दिलाउनुभएको छ ।
निर्वाचित हुँदै गर्दा बनाएका योजना र पाच वर्षे कार्यकालमा आफुले गर्ने कामको बारेमा वडा अध्यक्ष कोमल कुमार श्रेष्ठसंग गरिएको अन्तरवार्ताः
सर्वप्रथम त म पहिलो पटक निर्वाचन भईसके पश्चात वडा नम्बर ८ बासी सम्पुर्णले आफ्नो अमुल्य मत दिएर मलाई निर्वाचित गराईदिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु ।
तपाईले वडामा कस्तो खालको योजना लिएर आउनुभएको छ ?
मैले जुन आफ्नो वडा लाई कस्तो बनाउनुपर्छ यो समृद्ध वडा सुखि वडाबासीको नारा लिएर म अगाडी बढेको थिए । त्यसै अनुसार म आफ्नो कार्यकालमा वडा बासीको समस्यालाई रिपोर्टिङ गरेको छु र मेरो प्रतिबद्धता पनि सबै वडाबासीको हातहातमा दिएको छु । त्यसै अनुरुप आफ्नो कार्यकालमा पुरा गर्नेछु ।
ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मुख्य योजना के छन् ?
मुख्य रुपमा कमलामाई नगरपालिकाको ८ नम्बरमा खानेपानीको समस्या छ । प्रत्यक घरघरमा खानेपानीको धारा पु¥याउने उद्धेश्य लिएको छु । दास्रो भनेको कमला नदीले कटान गरेको खेतीयोग्य जग्गालाई संरक्षण गर्नुपर्ने छ । वडाबाट हुन्छ की प्रदेश बाट हुन्छ त्यसलाई समाधान गर्ने योजना छ ।
तपाईले योजनाहरु त छनोट गर्नुभएको छ । त्यसमा पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजना के छ ?
हाम्रो अहिले रिपोर्टिङको आधारमा त पहिलो प्राथमिकतामा खानेपानी नै छ । दोस्रोमा कमला नदीले कटान गरेको खेतीयोग्य जमिनमा तट्बन्ध गर्नुपर्ने छ । अनि स्वास्थ्य । भुगोलको आधारमा अलि बिकट भएकाले हेल्थपोष्टको स्थापना भएपनि त्यसलाई लामो समयको लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । अब शिक्षामा हाम्रो कमलामाई नगरपालिका ८ मा भौगोलिक बनावट अलि फरक भएकाले यसमा मैले शिक्षामा बिशेष जोड दिनुपर्ने छ । प्राविधिक शिक्षामा पनि पहल गर्न सक्यो भने युवाहरुलाई रोजगारी मिल्ने भएकाले यसमा पनि जोड दिनेछु ।
शिक्षा, सडक, खानेपानी, विद्युत, कृषि लगायत महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा के कस्ता योजना ल्याउनुभएको छ ?
शिक्षाको क्षेत्रमा मैले भन्नुपर्दा हाम्रो कमला आधारभुत विद्यालय तिनतलेमा विद्यार्थी संख्या बढ्ने क्रम छ त्यस कारण त्यहाँको जनचाहाना अनुसार माध्यामिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । अब म त्यो पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छु । त्यस्तै, हाम्रो वडामा पानी प्रसस्त भएपनि किसानहरुले भने जस्तो सिंचाईको व्यवस्था नभएकाले तरकारी खेती लगाएत हरेक किसिमका कार्य गर्न सकेका छैनन् । त्यसको लागि सिंचाईको व्यवस्था मिलाउनेछु । खानेपानीको लागि टेण्डरको प्रक्रिया भैसकेको छ । अब प्रत्यक घरमा धाराको व्यवस्था गर्ने योजना लिएको छु । हाम्रो वडामा सडकको ट्रयाक खोल्ने मात्रै काम भएको छ । यसलाई स्तरोन्नती गर्न प्रदेश सरकारसंग पहल गर्नेछु । यस्तै महिला तथा बालबालिकाहरुको लागि शिपमुलक कार्यक्रम ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याएको छु । अन्यायमा परेकाहरुलाइृ कसरी हुन्छ शिक्षामा अगाडी लैजाने पहल गर्नेछु ।
वडामा आउने बजेटले पनि नागरिकहरुको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ । किनभने त्यो वजेटले पनि प्रत्यक टोलटोलका नागरिकलाई के कस्तो समस्या छ निवेदन लिएर आउन अनुरोध गरेर उहाँहरुको आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ । नागरिकको सामान्य आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने हो । अरु आवश्यकता पुरा गर्न प्रदेश र संघ संग समन्वय गर्नुपर्छ ।
अब युवा तथा बेरोजगारहरुको लागि गाँउघर मै रोजगार दिन उहाँहरुको शिपको आधारमा र योग्यातको आधारमा रोजगार दिलाउन सक्छौ । यदि कुनै शिप र योग्यता छैन भने उहाँहरुको लागि शिपमुलक कार्यक्रम ल्याएर शिप प्रदान गर्छाै ।
अन्त्यमा म कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर ८ बासीले मलाई जुन अमुल्य मत दिएर जिताउनुभयो उहाँहरुलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहान्छु । मैले आफ्नो वडालाई सुखि वडा बनाउने उद्धेश्य लिएर आएको छु । त्यो अनुसार म तपाईहरुको मतको कदर गर्दै उहाँहरुको आशालाई निराशामा परिणत नगर्ने तवरले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्नेछु ।
बोलेरो दुर्घटनामा तिन जनाको मृत्यु
तीनपाटन गाउँपालिकाको लंगुरखोला एक साताका लागि शिल